हटकट नामक विश्वकै अनौठो यो शैलुन: जहाँ युवतीहरुले नग्न बनेर दिन्छन् सेवा, कपाल काट्नेहरुको लाग्छ लाइन | Rajmarga
एजेन्सी । हिजोआज पुरुषहरुका दाह्री कपाल पनि युवतीहरुले काट्न थालेका छन् । दाह्री कपाल काट्नु, मसाज गर्नु, सँगै समय बिताउनु सामान्य कुरा बनिसकेका बेला एएटा यस्तो अनौठो शैलुनको हामी चर्चा गर्दैछौँ जहाँ युवतीहरुले नग्न नै बनेर युवकहरुका दाह्री कपाल काट्ने गर्छन् ।
यो अनौठो शैलुन अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको छ । जुन शैलुन अहिले एकाएक चर्चामा छ । जहाँ पुरुषको कपाल तथा दाह्री टपलेस युवतीहरूबाट काटिन्छ । यहाँ कपाल काट्न तथा दाह्री बनाउन पुरुषहरू लाइन लाग्ने गर्दछन् । हटकट नामक यस शैलुनमा महिलाहरूले देखाउने अनौठो चरित्र हेर्न पुरुषहरु दाह्री कपाल नबढ्दै कटाउन भनेर पुगीरहेको देख्न सकिन्छ । यो अनौठो शैलीको सुरु गरेपछि यसका मालिक एकाएक धनी बनिरहेका छन् ।
तपाईंहरुको आँखा जुध्यो, उनले तपाईंलाई झवाट्ट हेरे र त्यहि एक सेकेन्डको हेराइमा नै पुरुषले तपाईंको बारेमा पाँच कुराहरु हेरि सकेका हुन्छन् । ती पाँच कुराहरु के हुन् ? पढौं न त ।
कपाल बाँध्नु भएको छ कि खुल्ला
कुनै पनि महिलाको कपाल खुल्ला छ कि बाँधिएको छ, पुरुषहरुले यो कुरा पहिलो नजरमा नै याद राख्छन् । रपुन्जेलको जस्तो लामो कपाल उनीहरुलार्ई चाहिँदैन तर, जस्तो भएपनि उनीहरुलाई खुल्ला कपाल नै मनपर्छ । आफूलाई मनपरेको महिलाको कपाल खेलाउन पुरुषहरु चाहन्छन् ।
एक वास्तविक मुस्कान
के तपाईंको मुस्कान आँखामा झल्किन्छ ? यदि यसको उत्तर सकारात्मक छ भने तपाईं झन् खुसी हुनुहोस् किनभने पुरुषहरु तपाईंको वास्तविक मुस्कानको निर्णय गर्न माहिर हुन्छन् ।
एक अध्ययनका अनुसार पुरुषहरु महिलाहरुको स्वरलाई बढि ध्यान दिन्छन् किनभने यो जवानी र प्रजनन स्वास्थ्यलाई थाहा पाउने विश्वसनीय आधार हो ।
तपाईंको हिपको बनावट
यदि तपाईंको पेट हिपभन्दा सानो छ भने यसले प्रजनन अवस्थालाई इंगित गर्छ र पुरुषहरुले यसको निकै ख्याल राख्दछन् ।
मानिसहरुले शरीरको अरु भागहरुभन्दा आँखामा बढि ध्यान दिन्छन् ।
Previous post: प्रम ओलीले भने–भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैले भ्रष्टाचार गरे छाड्दिनँ
Next post: दश वर्षीया बालिका बलात्कृत